Iingcebiso ezili-9 zokwenza kufuneka ubenakho ukuphila kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 5, 2019 0 IiCententarios 765
Iividiyo ezibukhoma ziye zaba yenye indlela kubasebenzisi abaninzi; Emva kokubonakala kwabo kwiYouTube nakuFacebook, namhlanje kukwakho ne-Instagram yokwenza. Abasebenzisi abaninzi beli qonga bayazibuza yonke imihla ukuba isebenza njani kwaye yeyiphi eyona nto isetyenziswayo; ukuphendula le mibuzo namhlanje siza kukunika yona Iingcebiso ezili-9 zokwenza kufuneka uphile kwi-Instagram, esinye sezixhobo ezilungileyo ukukhuthaza kunye nokunxibelelana nophawu okanye umyalezo.
Iingcebiso ezili-9 zokwenza kufuneka uphile kwi-Instagram Uyisebenzisa njani?
Ngaphambi kokukunika izindululo malunga nokusetyenziswa kwesi sixhobo, kubalulekile ukuba wazi ukuba sisetyenziswa njani. Kuqala kufuneka ungene kwisicelo esikwiselfowuni, tyibilika kwiscreen ngomnwe wakho de ufumane "amabali", beka ngasekhohlo ukhetho "oluqhelekileyo" kwaye ngokwenyani u "Phila", ucofe kwaye uqalise ukumisela unxibelelwano.
Uya kubona ukubala emva apho i-Instagram yaqala khona ukuseka unxibelelwano losasazo. Kuphela imizuzwana embalwa edlulileyo kwaye ukulungele ukuqala; Ukugqibezela ukuhanjiswa kobukhoma, kuya kufuneka ucinezele "ukugqiba" kwaye yiyo loo nto, ividiyo igcinwa ebalini.
Iingcebiso zokwenza bukhoma kwi-Instagram
Nge-smartphone kunye nonxibelelwano lwe-intanethi olungileyo, uya kuba ukulungele ukuya bukhoma. Kuya kufuneka uthathe ingqalelo kuthotho lweengcebiso.
I-Instagram Live ineenkcukacha ezithile zokungacwangciswanga, ngenxa yesi sizathu kuyafuneka ukuba wenze iskripthi esincinci ukuze ungenzi iimpazamo ngexesha losasazo, ngakumbi ukuba kunikwa imveliso entsha.
Bhala uxwebhu oluncinci apho ucacisa khona umxholo, umxholo, iindawo, amagama kunye nazo zonke iinkcukacha zomxholo ofuna ukusasaza ngqo. Ngezi zenzo ungabonisa ukhuseleko kwaye unolwazi njengenkxaso eyongezelelweyo.
Yenza umboniso wevidiyo
Sukurekhoda ividiyo ngqo, ngesixhobo sakho esiphathwayo, ngaphambili lungiselela ividiyo, apho unokulandela khona iskripthi, ngakumbi ukuba awulunganga kakhulu ekucwangciseni. Ngale ndlela unokuhlengahlengisa intetho, uphonononge izinto ezineempazamo kunye nokuphucula amagama.
Yazisa ngokuphila kwakho
Indlela elungileyo yokwenza ingqalelo kubasebenzisi kukwenza intengiso encinci, apho ngomfanekiso okanye ibhanile abantu banokufikelela kumhla kunye nexesha lokuyixabisa. Sebenzisa loo nto kwezinye iinethiwekhi zentlalo ukufumana abaphulaphuli abongezelelweyo.
Thatha ithuba lokhetho olunikezwe yi-Instagram "amabali" ukuyinyusa, kodwa khumbula ukuba kuphela apho banexesha leeyure ezingama-24. Ungalibali ukusebenzisa ngaphezulu ukuze ube nabaphulaphuli abakhulu.
Kubalulekile ukwazisa abasebenzisi ukuba siza kuba yintoni isihloko sosasazo, musa ukuyeka ukusibeka kunyuselo, abalandeli okanye abasebenzisi bahlala beqwalasele ulwazi.
Sebenzisa amagama aphambili kwintetho, ngaloo ndlela uya kuba nakho ukuchaza kunye neenkcukacha ngayo yonke into enxulumene nesihloko, ungalahli ukuqonda kwaye ujonge kumxholo ofuna ukuwubonisa kulutsha.
Ngaphakathi kwinkqubo ye-Instagram ebukhoma, kulungile ukuba ukhethe indawo ezolileyo nezolileyo. Unokukhetha indawo kwindalo, ipaki okanye indawo apho uyazi ukuba awuyi kuphazamiseka okwethutyana; Khumbula kwakhona ukukhubaza izaziso ezisuka kwamanye amaqonga ukunqanda ukubanjwa ngexesha losasazo.
Ukuba yikhonsathi ofuna ukuyinyusa okanye ukuyisasaza, khetha iindawo apho kungekho moya mkhulu nengxolo kuluntu; izinto ezithile zesandi zinokudideka kwaye iindwendwe ziyeke ngokukhawuleza ukubukela ividiyo; Kulungile ukusebenzisa ii-headphone ezineemakrofoni ukwenza ukuba umsindo uzinze ngakumbi.
Yenza umboniso wokuqala
Ukuphila kwi-Instagram kuthatha ixabiso kunye nokubaluleka xa zicacisiwe kakuhle. Ukwenza oku kulungile ukuqhuba umboniso ukuze usebenze njengendawo yokungena kwabo banqwenela ukubukela bukhoma.
Nasiphi na isicelo esikhoyo kwiivenkile ze-iOS kunye ne-Android zinokusetyenziselwa ukwenza umboniso wosasazo kwangaphambili. Njengomboniso kamabonwakude, ezi ntetho zinceda ukukhuthaza ababukeli kunye nabalandeli ukuba banamathele bakuxabise ukusasazwa.
Isixhobo sakho sokukhula kuthumelo lwe-Instagram kwaye ufumane abalandeli abafanelekileyo. Yonke into ehlala ekuqaleni ayinabalandeli abaneleyo, nangona kunjalo sicebisa ukuba sishiye ixesha eliqikelelweyo phakathi kwemizuzwana eli-15 ukuya kwengama-20 yokulindela ukuze abantu balinde ixesha elifutshane ekuqaleni.
Nangona kunjalo, ababukeli baya kuhlala benxibelelana njengoko bejonga iqonga kwaye babone ukuba ngubani osasaza ngqo. Yinto nje yomonde kunye nokulinda abaphulaphuli abalungileyo.
Ngelixa ukuumsinga, zibandakanyeke neendwendwe zakho. Jonga ukuba ngubani okwi-Intanethi kwaye ubathumele imibuliso; ukuba bacacisa imibuzo, zama ukuphendula ngokukhawuleza nangokuzolileyo; Ukuba umntu othile wenza amagqabantshintshi, musa ukuphulukana nolawulo kwaye ugcine ukuzola kwakho ngokuphendula ngokungathandekiyo ngaphandle kokuzikhathaza.
Khumbula ukuba ukuhlangana kweli candelo kunceda ukuphucula ubukho bakho kwi-Instagram, ngakumbi ukuba ukwinkqubo yokwazisa uphawu okanye imveliso.
Kuthumelo ngalunye musa ukuzama ukugqithisa okanye ukubeka umbono ongaphezulu, ongaziyo, zama ukukwenza ngothando, amabinzana endalo zezona zilungileyo. Khumbula ukuba i-Instagram bukhoma ayisiyondawo yokujonga ukugqibelela komxholo.
Nangona kunjalo, unakekele iinkcukacha kwaye uzame ukulungisa impazamo xa isenzeka, ungalibali ukuyikhankanya, singabantu kwaye iimpazamo ziyinxalenye yezenzo zabantu. Ngale ndlela, kuya kufuneka uphumle kwaye wonwabe kusasazo, uhleke kwaye uzive ukhululekile.
Ngokungafaniyo nezinye izixhobo zokusasaza ngqo ezifanayo nezo ze-Instagram, ayiboneleli ngayo nayiphi na ikhonkco onokuyisebenzisa ukuyinyusa kwenye inethiwekhi yoluntu. Beka ikhonkco ukuze abantu baye ngqo kwi-Instagram kwaye bayixabise ukusuka apho.
I-Instagram bukhoma iya kufumaneka njengevidiyo ebalini iiyure ezingama-24, kamva unokuthatha isigqibo sokuyigcina ukuba ayizukucinywa kwaye akuyi kubakho ndlela yokuyifumana kwakhona. Kungenxa yoko le nto iinkampani kunye nabaphembeleli abasebenzisa esi sixhobo besazi kakhulu ukuba basigcine okwethutyana.
Ngaba ukuthandile ukwazi ukuba i-Instagram isebenza njani? Ukuba uyazi naluphi na olunye ukhetho malunga nezi Iingcebiso ezili-9 zokwenza kufuneka uphile kwi-InstagramSazise kwizimvo. Sikwacebisa ukuba wandise olu lwazi ngokufunda inqaku elilandelayo Uwajonga njani amabali e-Instagram ngaphandle kokubonwa?.
1 Iingcebiso ezili-9 zokwenza kufuneka uphile kwi-Instagram Uyisebenzisa njani?
2 Iingcebiso zokwenza bukhoma kwi-Instagram
2.1 Yenza iskripthi
2.2 Yenza umboniso wevidiyo
2.3 Yazisa ngokuphila kwakho
2.4 Chaza isihloko
2.6 Yenza umboniso wokuqala
2.7 Yiba nomonde
2.8 Nxibelelana nababukeli
2.9 Yenza okugqibelele
Qinisekisa iakhawunti ye-Instagram